सबैभन्दा लोकप्रिय खेल को एक आज स्पष्ट सजिलो भए तापनि संसारभरि प्रयोगकर्ताहरूको प्रेम जित्यो जो, Minecraft, को छ। अन्य कुनै पनि वस्तुहरु र आफ्नो मनपर्ने खेल को वर्ण संग मामला छ रूपमा, Minecraft वर्ण कागज मा फोटो लागि प्रयास। तल यी निर्देशनहरू निम्न, सबैलाई कसरी एक Creeper, गेमिंग राक्षस को एक आकर्षित गर्न सिक्न सक्छन्।
को Minecraft के हो?
खेल विभिन्न वस्तुहरु को निर्माण को प्रक्रिया मा आधारित छ। रचनात्मकता को यस प्रकारको जो तपाईं सबैभन्दा विचित्र र अचम्मको संरचना सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। बाट सानो ठूलो गर्न - घन हजारौँ निर्माण असामान्य र जस्तो देखिने पुरानो जमानाको विश्व, मा घन्टा को लागि प्रयोगकर्ताहरूको हरेक पुस्ता drags। तिनीहरूलाई धेरै तिनीहरूले खेल भित्र लड्न छ, खेल संसार केही तत्व, तिनीहरूले रुचि हो कम से कम कागज कसरी एक Creeper वा केही अन्य राक्षस आकर्षित गर्न, उदाहरणका लागि, सार्न खोज्दै हुनुहुन्छ।
को Creeper गर्ने हो?
प्रशंसक, पाठ्यक्रम, राक्षस र Minecraft संसारमा प्ले भूमिका कस्तो छ भनेर व्याख्या छैन। तर आफ्नो नयाँ मूल चित्र ग्यालरी अप भर्न चाहनुहुन्छ र प्रतिनिधित्व हुनेछ जुन वर्ण, बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूका लागि, हामी यस सन्दर्भमा जानकारी दिन हुनेछ। सायद यो एक Creeper आकर्षित गर्न कसरी सामना गर्न मद्दत गर्नेछ।
यो Creeper छ: तपाईं खेल मा बारी र खेलाडी आउँदै गर्दा sizzle गर्न सुरु हरियो, लगभग मनमनै-सार्दा राक्षस देख्नुहुन्छ भने, र डेढ सेकेन्ड पछि विस्फोट गर्न, बाँकी तिमी गलत छैनन् भनेर आश्वासन दिए। किनभने, उहाँको वरिपरि सबै विनाश बाहेक, उसले आफूलाई पनि विस्फोट मा गायब यो, कामिकाजे राक्षस भनिएको छ।
निम्न कथन कसरी "Maynkrafta" बाट एक Creeper आकर्षित गर्न जान्न चाहने सबैलाई, तर तपाईंको रेखाचित्र जहाँ सुरु गर्न कुनै विचार गर्न मद्दत गर्नेछ। यो गर्न, तपाईँले तल रेखाचित्र ध्यान, केही सरल कदम पालन गर्न आवश्यक छ।
शरीर Creeper हुने छवि 1, दुई समकोणहरू आकर्षित।
शरीर संग Parallelism विस्तार गर्ने प्रयास, आफ्नो खुट्टा समाप्त गर्न। तपाईं शासक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। परिणाम ढाँचा नम्बर2हुनुपर्छ।
एक राक्षस को टाउको र अनुहार चित्रण, चित्र गर्न pririsoval मुख र आँखा नम्बर3मा बाहिर आए।
चित्रा नम्बर4मा गरिन्छ रूपमा खुट्टा, धेरै रेखाहरू Creeper थप्नुहोस्।
प्वाल ढाँचा, गाढा छाया खुट्टा, आँखा र परिणामस्वरूप राक्षस को मुख जोड दिंदै। आंकडा5त्यहाँ एक परिणाम हुनुपर्छ भन्ने छ।
माथि वर्णन अल्गोरिदम कसरी चरण Creeper द्वारा चरण आकर्षित गर्न व्याख्या गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईं एक पेन्सिल र कागज हातमा मा आयोजित कहिल्यै भए पनि, फोटो यो चरित्र छैन धेरै एक कठिन कार्य हो। सायद यो पछि छलफल गरिने केही चाल, मदत गर्नेछ।
शुरुआती लागि चाल
यी टिप्स छैन एकदम त शानदार पढेपछि लाग्न सक्छ, तर निकै चाहनेहरूलाई को कार्य सरल, तर कसरी "Maynkrafta" बाट एक Creeper आकर्षित गर्न थाहा छैन।
आफ्नो पहिलो प्रयोग को लागि नवोदित कलाकार एक पिंजरे मा परिदृश्य मा एक सामान्य कागज, र copybook प्रयोग गर्न सक्दैन। सारा बिन्दु खेल मा सबै वर्ण लागि आधार एक घन छ कि छ, त्यसैले यो एक भविष्य रेखाचित्र डट्स को सीमाना चिनो र अधिकतम सीधा लाइन प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई सँगै राख्न धेरै सुविधाजनक हुनेछ, र फलस्वरूप - सुन्दर र सही तस्वीर।
तपाईं गाह्रो पाउन भने एक मा धेरै आकारहरू संयोजन गर्न पहिलो पटक, र तपाईं, परिणाम कागज मा प्रशिक्षण दिन सक्छौं रही व्यक्तिगत तत्व चित्रण गर्ने र प्रत्येक अन्य जडान संग दुखी छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - सबै तथ्याङ्कले कोरिएका हुन्छन् भएको सिद्धान्त बुझ्न र प्रशिक्षण मा समय र प्रयास को एक निश्चित रकम पछुताउनु छैन। त्यसपछि तपाईं एक Creeper सबैभन्दा व्यावहारिक र निगरानी स्क्रिनमा देखिन्छ छवि नजिक कसरी थाहा छौँ।
जो सुरु ती लागि सुझाव
पहिलो र मुख्य बोर्ड रेखाचित्र गर्न निर्णय - 100% केहि माथि प्रतिलिपि छैन। तपाईं कथन माथि प्रस्तावित देख छ के गर्न आवश्यक छ कि मुख्य कुरा यो वहन भन्ने विचार बुझ्न छ। यो एक ऐनामा आकर्षित गर्न - सानो सुरु गर्न प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि यो अरू कसैले पहिले के देखाइएको छ, र आफ्नो छवि, तपाईंको आफ्नै अनुभव प्रतिलिपि हुनेछ।
सकेसम्म विवरण धेरै भेट्टाउने प्रयास गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, केही वातावरणमा आफ्नो चरित्र राख्नु, र कागज को एक साफ पाना को छविमा यो नछोड। यो, कल्पना थप स्पेस प्रदान गर्नेछ काम थप रोमाञ्चक बनाउन र दिनचर्या जोगिन मदत गर्नेछ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा - बस सानो विवरण रंग प्रयास छैन। हामी सामान्य देखि विशेष गर्न, साना ठूलो देखि सार्न गर्न आवश्यक छ। हातमा र खुट्टामा: यो, उदाहरणका लागि काण्ड र त्यसपछि उनको pririsovyvat सानो तत्व गर्न, सबै भन्दा ठूलो भाग प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हामी गल्ती र तिनीहरूलाई सच्याउन डराउनु हुँदैन। उहाँले सामना गर्न सुरु जे newcomers, कुनै पनि, छैन तिनीहरूलाई प्रतिरक्षा छ। तपाईं गलत हुनुहुन्छ, तथ्यलाई तपाईँले खेती, काम गर्ने हो, र अगाडि जाने र अझै पनि खडा गर्न भन्नुहोस्। स्थिर अभ्यास र समय कौशल को honing, एक Creeper, साथै अन्य धेरै उत्तिकै रोचक रेखाचित्र कोर्न कसरी तपाईं र तपाईंको मित्र प्रसन्न हुनेछ प्रश्न छोड्न छैन, तिनीहरूले देखाइएको वा प्रस्तुत गरिने छ।
तेल पेंट्स कसरी आकर्षित गर्न
उहाँले कसरी बस्ने र पीओएल Gogen लागि काम? को कलाकार्यहरू, आफ्ना समकालीनहरूको द्वारा अपरिचित
Endi Uorhol: चित्रहरू। चित्रहरूले Endi Uorhola
कसरी छाप आकर्षित गर्न - मास्टर को advices
चित्रकला मा Futurism - 20 औं शताब्दीको चित्रकला मा छ ... Futurism: प्रतिनिधिहरु। रूसी चित्रकला मा Futurism
चित्रकारी "मास्को यार्ड" Polenova
Minimalism को शैली मा भान्सा डिजाइन (फोटो)
विवरण, विशेषताहरु र रोचक तथ्य: यो एक खोल बिना कछुवा जस्तो देखिन्छ
उपत्यका Neberdzhay: पवित्र Springs, प्रभाव दिन जो
क्लब होटल Caretta बीच4* (टर्की, Alanya): समीक्षा, फोटो
एलसीडी "राशिफल" (मास्को): विवरण, समीक्षा
स्वस्थ मस्तिष्क जहाजहरु - atherosclerosis को रोकथाम
कसरी आफूलाई आफु लाई नुन पार्नु
किन सेक्स बारेमा सपना
ओवन मा succulent सुँगुरको मासुको चोक्टा खाना पकाउने।